Trump oo ka hadlay weerar lagu qaaday labo saldhig oo militariga Mareykanka kaga sugan… – Hagaag.com
Trump oo ka hadlay weerar lagu qaaday labo saldhig oo militariga Mareykanka kaga sugan…
Posted on 8 Janaayo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa ka hadlay weerarka ay Iran ku qaaday saldhigyada uu Mareykanka kaga sugan yahay gudaha dalka Ciraaq.
Trump ayaa bartiisa Twiter-ka kusoo qoray in ay qiimeynayaan sida ay wax u dhaceen.
“Waxwalba waa ay dhan yihiin, gantaalo laga soo tuuray Iran ayaa lagu weeraray laba saldhig oo aan ku leenahay Ciraaq, qiimeynta khasaaraha ka dhashay ayaan wadnaa, waxwalbana waa hagaag, waxaana leenahay ciidanka ugu awoodda badan caalamka ee heysta hub carsi ah, dib ayaana kasoo sheegi doonaa sida ay wax u dhaceen”, ayuu yiri Trump.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in laba saldhig oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka, kuna yaala gudaha dalka Ciraaq lagu weeraray gantaalo.
Xukuumadda Washington waxay intaa raacisay in saldhigyada la bartilmaameedsaday ay yihiin Irbil iyo Al Asad, ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkaas iyo inta uu la eg yahay.
Warbaahinta dalalka Carabta ayaa kusoo warramay in inkabadan toban gantaal lagu garaacay saldhigayada Mareykanka.
Warbixin u soo saaray afhayeenka aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu latashiyo la sameynayo lataliyeyaashiisa dhanka ammaanka.
Dowladda Iran ayaa dhankeeda sheegtay in weerarka lagu qaaday saldhigyada Mareykanka uu ahaa mid loogu aargudayay dilka Qasem Suleimani oo shalay la aasay.
Iran ayaa sidoo kale u digtay wadamada xulafada la ah Mareykanka ee dalalkooda u oggolaaday in uu saldhigyo ku yeesho.